I-Semalt ichaza indlela yokusebenzisa ii-Web Scrapers ukulungiselela i-Content Content yakho
OKLAHOMA SPORTS GRIND
I-scraper iskripthi esetyenzisiweyo ukukhipha idatha kwiisayithi. I sixhobo se-scraper isebenza ngokuthumela umbuzo othize kwiwebhusayithi kwaye idlulise idatha ye-HTML. I-Web scraping iyinkqubo esetyenziswa kakhulu kwiimarike zemali kunye ne-intanethi yokuthengisa.
Indlela yokusebenzisa i-web scraper
I-web scraper ikhetha kwaye igxininisa umxholo oyifunayo ngaphakathi kwidokhumenti kwaye iguqula idatha oyifunayo kwiifom ezifundwayo kunye neziprotocol. I-Web scraping tools zisebenzisa umsebenzi wokukhipha idatha efana nevidiyo, iinkcazo zemveliso, itekisi kunye nemifanekiso.
Kutheni i-web ikrazula?
Ngaba usebenza ekukhenkheni idatha kwiisayithi ngaphandle kwekhowudi? I-Web scraping iyindlela yokuhamba. Njengomthengisi-mali-mali-mali, unokuyila i-web scraper usebenzisa iilayibrari ezahlukahlukeneyo ezihambelana nemimiselo yakho yokuthengisa.
Nge-scraping web, ungakwazi ukudibanisa ngokuqulathekileyo umxholo usebenzisa iilwimi zokusetyenziswa njengeRuby, PHP, kunye nePython. Nangona kunjalo, ezinye iingxaki zingama phakathi kwakho kunye nokukhwa kwewebhu. Le mingeni ikhusela i-webmasters ekusebenziseni i-web scrapers ngokufanelekileyo. Nazi ezinye iimingeni zokugcina engqondweni.
Ukuba uqala ukuqala okanye umgaqo, emva kwesikhokelo sesifundo malunga nendlela yokusebenzisa i-web scraper kuyinconywa. Ngokomzekelo, ukungaphumeleli ukusebenzisa isitayela esikhankanyiweyo kwenza kube nzima kubafundi be-scrapers ukufunda nokutshintshisa idatha yakho.
iindawo ze-HTML5 eziphuhlisiwe
Inani elithile lezayithi liphuhliswe nge-HTML5, into ebalulekileyo eyenza kube nzima kwiwebhu
Uluhlu oluhlukeneyo lwewebhu
Iingcebiso malunga nendlela yokusebenzisa i-web scraper kwi-
Ukufumana iinkcukacha ezithile kwisayithi kunokunzima. Basebenzela ukukhipha idatha kwiziko elincinci, cinga ukuphuhlisa nokwenza ngokwezifiso i-scraper yakho. Khumbula ukuba wenze ngokwezifiso kwaye ubeke umgangatho wokuvelisa kwi-100%.
Izikhokelo zendlela yokukhipha idatha usebenzisa i-web scrapers
Hlaziya iiskrini ezibandakanya idatha ngokuhlola isakhiwo sakho se-DOM
Ukuphuhlisa iproodeor yokukhupha idatha
Hlola kuqala Iimbalo zokuqokelela idatha kwiifom ezifundwayo
Inkqubo yedata ngumzekelo omhle wekhowudi ye-HTML. Le khowudi ithola i-URL yewebhusayithi njengengeniso kwaye ibonisa idatha echanekileyo njengemveliso. Inkqubo yodada isebenza ekunqumeni umfundi ukuba asebenze idatha yakho ngokubeka phambili kwizinto ezikhethiweyo. Ukuba umfundi we-system akakwazi ukufunda i-URL, i-URL ihanjiswa kwenye i-reader.
Kwabaqalayo, ukuphuhlisa impendulo yempendulo kukhuthazwa ukufumana izikhalazo malunga nomxholo ophindiweyo. I-Quick Feed prompt iyakusiza abathengisi kunye neeblogi ukuba benze umgangatho ophezulu kunye nomxholo omtsha. Njenge-webmaster, ubeka phambili phambili kwimveliso yomgangatho.
Ekuthengiseni, isiphelo sigqibelela iindlela. Ukususela kwigama lokuqala, qwalasela ukuhlalutya imingcipheko kunye nemingeni eya kuphazamisa umkhankaso wakho we-intanethi. Ukukhetha inkqubo yokuqhawula kungabakho nkqantosi kubaqalayo. Musa ukuvumela iingxangxaka ziphazamise umkhankaso wakho wokukrazula iwebhu. Bhalisa nge-Upwork ukuze ube neetitshala ezininzi malunga nendlela yokusebenzisa i-web scraper kwaye ufumane umxholo ophezulu.